Tijaabooyinka daroogada waxay muujinayaan inay suurtagal tahay in la beddelo da'da bayoolojiga - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA »Tijaabooyinka daroogada waxay muujinayaan inay suurtagal tahay in la beddelo da'da bayoolojiga - BGR
Waqtiga aan dhammaadka lahayn ee waqtiga ayaa ugu dambayntii nafta nooga qaadi doona, ama ugu yaraan taasi waa xaqiiqda aan wada rajeynayno. Marka laga soo tago daahfurka fountain-taariikha ahayd ee dhallinta, waxba kama qaban karno da'da, laakiin tijaabooyinka daroogada ee cusub waxay soo jeedinayaan in tani ay ugu dambeyntii beddeli karto, natiijooyinka xitaa waxay ka yaabisay saynisyahannadii sameynayey tijaabooyinkan.
dhawaan lagu daabacay Aging Cell waxay shaaca ka qaaday in regiment gaar ah oo hormoonnada koritaanka iyo daroogada waxay u egtahay rajo in laga beddelo da'da bayoolojiga ee qofka. Baadhitaanka waxaa lagu sameeyay qiyaaso aad u yar, oo ay kaqeybgaleen sagaal qof oo qaangaar ah mana jirin kooxo xakameynaya, laakiin natiijooyinka sikastaba ha ahaatee waa kuwo xiiso leh.
Sannad dhan, kooxda yar ee tabarucayaasha ah waxay ku qasbanaadeen inay raacaan barnaamijka daaweynta daroogada adag oo ay ka mid tahay koritaanka. hormoonnada iyo labo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo daaweynta sonkorowga. Da'dooda cilmiga - oo cabbira isbeddelada hiddo-wadaha qofka waqti ahaan isla markaana si caadi ah loogu isticmaalo in lagu go'aamiyo da'da jirkooda oo ku saleysan da 'ahaan.
Markii tijaabada la soo gabagabeeyey, waxaa la go'aamiyay in da'da bayoolojiga ee shakhsiyaadka ay ahaayeen qiyaastii hal sano iyo badh ka yar markii ay bilaabeen sanad ka hor, taas oo macnaheedu yahay inay dhab ahaantii ka yaraayeen 2,5 sano kayar. ma ay joogsan lahaayeen dhamaadka imtixaannada. Hoos u dhaca da'da bayoolojiga ayaa sii jiraya lix bilood kadib dhammaadka tijaabooyinka.
"Waxaan filayay inaan arko hoos u dhac ku yimaada saacadda, laakiin aan ahayn dib-u-noqosho," ayuu yidhi dhaq-dhaqaaqa hiddaha Steve Horvath, oo kaqeybqaatay cilmibaadhista. bayaan. Waxay iila muuqatay wax aan mustaqbal u arkaa.
Natiijooyinka ayaa cad inay yihiin kuwo muhiim ah, laakiin waxaa mudan in la xusuusto sida ay u yar tahay daraasaddan. Waa inaan go'aan adag laga gaadhin wax ku oolnimada daaweynta noocaas oo kale ah iyadoo muunad yar oo kale ah, cilmi baarayaashu waxay tan ku caddeeyeen dhowr jeer maqaalkooda. Si kastaba ha noqotee, waa soo-saar xiiso leh oo runtii u qalma baaritaan dheeraad ah.
Isha Sawirka: Heinz Schmidbauer / imageBROKER / Shutterstock
Qaraxyada waxay mas'uul ka noqon karaan harooyinka adag ee Saturn ee Titan - BGR